Chii chinoshandiswa-chiyero chezuva EPC uye vanogadzira vanogona kuita kuti vabudirire kuyera mashandiro
NaDoug Broach, TrinaPro Bhizinesi Rekuvandudza Maneja
Nevaongorori veindasitiri vanofungidzira yakasimba tailwinds yekushandisa-chiyero chezuva, EPCs uye vanogadzira mapurojekiti vanofanirwa kuve vakagadzirira kukura mashandiro avo kuzadzikisa kudiwa kuri kukura uku. Kungofanana nechero bhizinesi rekuyedza, maitiro ekuwedzera oparesheni anouya akazara nenjodzi nemikana.
Funga nezvematanho mashanu ekuti ubudirire kuyera mashandiro ezuva:
Kujekesa kutenga pamwe ne-stop stop
Kuwedzera mashandiro kunoda kuita zvinhu zvitsva zvinoita kuti bhizinesi riwedzere kushanda uye kurongeka. Semuenzaniso, pachinzvimbo chekubata nenhamba yakawedzera yevanopa uye vagovera kuti vasangane nechinodiwa chiri kukura panguva yekuwedzera, kutenga kunogona kuve nyore uye kurongedzwa.
Imwe nzira yekuita izvi inosanganisira kusanganisa zvese module uye chinhu kutenga mukutenga chimwe chinhu kune imwechete-yekumira kutenga. Izvi zvinobvisa kudiwa kwekutenga kubva kune vakawanda vanogovera uye vatengesi, uyezve wobatanidza kwakasiyana kutumira uye kuendesa zvigadzirwa pamwe neumwe neumwe wavo.
Kurumidza kubatanidza nguva dzekubatana
Kunyangwe hazvo mashandisirwo emagetsi ezuva 'akayerwa mutengo wemagetsi (LCOE) iri kuramba ichiderera, mari yekuvaka yevashandi iri kuwedzera. Izvi zvinonyanya kuitika munzvimbo dzakaita seTexas, uko mamwe maseru emagetsi sekutsemura uye nzira yekuchera inokwikwidza kune vamwe vanoita basa sevashandisi vemagetsi ezuva.
Yakaderera purojekiti yekuvandudza mitengo ine kukurumidza kubatana nguva. Izvi zvinodzivirira kunonoka uchichengeta mapurojekiti panguva uye mukati mebhajeti. Turnkey utility Solar solution inobatsira kuita gungano rehurongwa kukurumidza apo ichiona kubatana kwekubatana uye nekukurumidza kubatana kwegridhi.
Kurumidza kumhanyisa ROI neakakwira simba kuwana
Kuva nezvimwe zviwanikwa paruoko ndechimwe chinhu chakakosha chinodiwa kuti ubudirire kuyera mashandiro. Izvi zvinobvumidza mikana yakakura yekudyara zvakare yekambani kutenga zvimwe zvekushandisa, kuhaya vashandi vatsva uye kuwedzera zvivakwa.
Kusunga pamwechete ma module, inverters uye e-axis-trackers anogona kuvandudza kusabatana kusabatana uye kuwedzera simba kuwana. Kuwedzera kwekuwana kwesimba kunomhanyisa ROI, iyo inobatsira vanobatika kugovera zviwanikwa zvakawanda kumapurojekiti matsva ekukudza mabhizinesi avo.
Funga kutsvaga masisitimendi emakambani ekubhadhara mari
Kutsvaga vezvemari chaivo uye vanoita mari kwakakosha pakuwedzera. Masisitimendi emari, akadai sepenjeni, inishuwarenzi uye mari yezvivakwa, vanogara vachitsvaga mapurojekiti akasimba anopa kudzikama, kwenguva refu "bond-like" inodzoka.
Sezvo zvishandiso zvezuva zvichiramba zvichikura uye zvichipa kudzoka kusingachinjiki, vazhinji veaya masisitimari ekudyara izvozvi vari kuzvitarisa sechinhu chinogona kuve chinhu. International Renewable Energy Agency (IRENA) yakashuma a kukura muhuwandu hwemapurojekiti akasimba anowedzerwazve emagetsi anosanganisira varidzi vemasangano Zvisinei, aya mapurojekiti akangoita zvikamu zvinokwana kuita zvikamu zviviri kubva muzana zvemari, zvichiratidza kuti mukana wemari yemasangano hauna kushandiswa zvakanyanya.
Partner neese-mu-imwe rezuva mhinduro mupi
Kugadziridza nhanho idzi dzese kuita imwechete isina musono inogona kuve chimwe chezvikamu zvakaoma kwazvo pakuwedzera mashandiro. Tora basa rakawandisa pasina vashandi vakakwana kuti vabate zvese? Hunhu hwebasa hwakatambura uye nguva dzakatarwa dzakarasika. Proactively kuhaya vamwe vashandi kupfuura iwo huwandu hwebasa rinouya? Pamusoro pevashandi zvinodhura mudenga pasina capital inouya kuzobhadhara idzi ndyiko.
Kuwana iyo chaiyo chiyero kunonetsa. Nekudaro, kudyidzana neyese-mu-imwe smart solar solution mupiki inogona kushanda seyakakura zvakaenzana yekuyera mashandiro.
Ndipo panopinda iyo TrinaPro Solution. NaTrinaPro, vanobatana vanogona kudzosa matanho senge kutenga, dhizaini, kubatana uye O&M. Izvi zvinobvumidza vanobatika kuti vatarise pane zvimwe zvinhu, senge kutanga mamwe mapoinzi uye kupedzisa zvibvumirano zvekukwirisa mashandiro.
Buda iyo yemahara TrinaPro Solutions Guide Bhuku kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekubudirira kuyera zvishandiso zvezuva mashandiro.
Ichi chikamu chechitatu mune mana-chikamu akateedzana pane yekushandisa-chiyero zuva. Tarisa uone munguva pfupi inotevera inotevera chikamu.